Xamaasad - Wiilasha Jacaylka - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
xamaasad Celceliska 3.7 / 5 ka mid ah 78
40aad, waxay leedahay 292.4K views
Wiilasha Jacaylka, Fantasy, Hal toogasho, Sigaar, Webtoons, Yaai
Isticmaalayaasha 66 ayaa calaamadeeyay Tani
Choi Moonhyuk waxa ay u dagaalami jirtay naadi sharci darro ah. Wuxuu samayn doonaa wax kasta si uu u ilaaliyo walaalihiis. Maalinta loo malaynayo guushiisa 15aad ee isku xigta, wuxuu ku dhamaanayaa guuldarada waxaana laga iibiyaa ina Daebuho, Seo Yeonjin. Iyadoo la raacayo qorshayaasha Yeonjin ee aan xishoodka lahayn, MoonhyuChoi Moonhyuk wuxuu ahaan jiray dagaalyahan naadi sharci darro ah. Wuxuu samayn doonaa wax kasta si uu u ilaaliyo walaalihiis. Maalinta loo malaynayo guushiisa 15aad ee isku xigta, wuxuu ku dhamaanayaa guuldarada waxaana laga iibiyaa ina Daebuho, Seo Yeonjin. Iyadoo la raacayo qorshayaasha Yeonjin ee aan xishoodka lahayn, Moonhyuk wuxuu ku dhamaanayaa inuu noqdo eeygiisa waalan oo dabaysha hoosteeda dabaysha.
Waxaad ogaan kartaa qaar badan yaase
Cutubka 61 February 12, 2022
Cutubka 60 February 12, 2022
Cutubka 59 February 12, 2022
Cutubka 58 February 12, 2022
Cutubka 57 February 12, 2022
Cutubka 51 December 14, 2021
Cutubka 50 December 14, 2021
Cutubka 49 December 14, 2021
Cutubka 23 January 12, 2021
Cutubka 22 January 12, 2021
Cutubka 21 January 12, 2021
Cutubka 19 January 12, 2021
Cutubka 16 January 12, 2021
Kooxda Daraasada ee Sunggi
Buug Riyooyin Ah